Tag: Xassan | Sagal Radio Services
Jawaari iyo Shariif Xasan oo ku loolamaya Golaha Wasiirada (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • March 17, 2017
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa culeysyo iyo cadaadis aan xad laheyn kala kulmaya Beellaha Hawiye iyo Digil iyo Mirifle oo ku saleysan xulidda xubnaha Wasiirada ka noqonaya Xukuumaddiisa, xilli Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Madaxweynaha Maamul goboleedka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ku wada loolamayaan in shakhsiyaad saaxiibo iyo qaraabo la ah ay ku yeeshaan Golaha Wasiirada cusub.
Ma ogtahay in Xasan Sheekh uu noqonayo Xildhibaan inta uu nool yahay (Qodob Dastuuri ah)
Sagal Radio Services • News Report • February 16, 2017
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xilka wareejinaya ayaa noqonaya Xildhibaankii u horeeyay ee ka tirsan Golaha Shacabka, inta uu nool yahay.
Wasiir ka tirsan Koofur Galbeed oo sharci daro ku tilmaamay Musharaxnimada Shariif Xasan
Sagal Radio Services • News Report • January 9, 2017
Wasiirka Diinta iyo Ow-qaafka maamulka Koofur Galbeed ayaa sharci daro ku tilmaamay musharaxnimada Shariif Xasan Sheekh Aadan oo doonaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Shariif Xasan oo codsi u diray Madaxweyne Xasan Sheekh
Sagal Radio Services • News Report • December 12, 2016
Madaxweynaha maamul goboleedka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa ka codsaday madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu dalacsiiyo saraakiisha ciidamada Koofur Galbeed.
Shariif Xasan oo la ogaaday in Musharaxnimadiisa Madaxweyne ay tahay mid siyaasadeed (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2016
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa bilaabay olole ballaaran uu kaga dhaadhicinayo Xildhibaanada labada Aqal ka soo galay deegaanada maamulkiisa qorshihiisa siyaasadeed ee ololaha doorashada.
Shariif Xasan oo dadaal ugu jira in la soo hormariyo doorashada Madaxweynaha (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2016
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ahna Musharax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo hormarin lahaa doorashada Madaxweynaha, kaddb markii uu dib u dhac ku yimid doorashadii Guddoonka Baarlamaanka.
Ugaas Xasan “Waxaa idin cadeynayaa inaan Jowhar marnaba tagi doonin, Hirshabeelle aan wax shaqo ku laheyn”
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2016
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa si cad u diiday inuu tago magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka cusub ee Hirshabeelle, isagoo tilmaamay in aanu aqoonsaneyn maamulka lagu dhisay Jowhar.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa daaha ka rogaya Ololihiisa Doorasho (Xaflad ka socota City Palace)
Sagal Radio Services • News Report • September 16, 2016
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud, mar kalena u taagan doorashada Madaxweynaha ee October ayaa caawa daaha ka rogaya Ololihiisa doorashada, iyadoo Munaasabad lagu soo bandhigayo afartii sano waxqabadkiisa ay ka socoto Hotelka City Palace.
Ugaas Xasan “Waxaa ka xumahay in Maxamed Cabdi Afey uu kala garan waayo Islii iyo Hiiraan”
Sagal Radio Services • News Report • September 1, 2016
Qaar ka mid ah Duubabka dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Beledweyn waxay kaga soo hor-jeesteen shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu wado in maalinta Sabtida ah dib uga furmo magaalada Jowhar.
Shariif Xasan “Doorashada ka hor waa in Al-Shabaab laga saaraa, meelaha ay ku sugan yihiin”
Sagal Radio Services • News Report • May 15, 2016
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu baaqay ciidanka xoogga dalka iyo AMISOM in la dadajiyaan howl galada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa.
Maxkamadda Ciidamada oo goor dhow dil toogasho ku fulisay Xasan Xanafi
Sagal Radio Services • News Report • April 11, 2016
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow dil toogasho ah ku fulisay Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kaasoo horay loogu soo eedeeyay inuu ku lug lahaa dilalka Wariyeyaal.
Xasan Xanafi oo maanta la soo taagayo Maxkamad
Sagal Radio Services • News Report • March 3, 2016
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilaabeysa dhageysiga dacwada loo heysto Xasan Xanafi Xaaji oo loo heysto inuu maleegay dilal loo geystay tiro Saxafiyiin ah oo ka howl galayay magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan oo ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • February 29, 2016
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan oo Mooshin ka dhan ah laga wado
Sagal Radio Services • News Report • January 24, 2016
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa sheegay in ay mooshin ka wadaan Madaxweynaha maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Madaxweynaha “Taageerada beesha caalamka waa u muhiim dib u dhiska Soomaaliya,
Sagal Radio Services • News Report • December 8, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay si rasmi ah magaalada Muqdisho ugu soo xiray aqoon is-weydaarsi muddo saddex maalmood ah socday, oo ay ka soo qeyb galeen xubno ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, kaas oo looga hadlayey mashaariicda horumarinta ee barnaamijka Cahdiga Cusub (New Deal).
Sheekh Xasan Turki oo geeriyooday iyo Afhayeenka Al-Shabaab oo xaqiijiyay geeridiisa
Sagal Radio Services • News Report • May 28, 2015
Sheekh Xasan C/llaahi Xirsi oo ka mid ahaa Hogaamiyeyaashii aas aasay xarakooyinkii Islaamiga ahaa, kana tirsanaa Hogaamiyeyaasha Al-Shabaab ayaa geeriyooday, kadib xanuun in muddo ah hayay.
Madaxweynaha “Tanaasul in la sameeyo ayaa loo baahan yahay, waqtigu waa yar yahay…”
Sagal Radio Services • News Report • January 27, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dhinacyada diidan in Xukuumada cusub lagu soo daro Wasiiro ka mid ahaa Xukuumadii kalsoonida lagala laabtay ayaa waxaa uu u jeediyay inay tanaasul sameeyaan, maadaama dowladda Soomaaliya uu waqtiga ku yar yahay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo diyaarad Turkish Airlines la soo raacay Shacab Soomaaliyeed (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • October 30, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib safar hal maalin ah oo uu ku tagay dalka Turkiga, iyadoo uu ka qeyb galay sanad-guurada 90aad markii la aas aasay jamhuuriyada Turkiga.
MADAXWEYNAHA SOMALIA: “Calanku waa Astaanta Soomaalida oo dhan Mideynaysa, waana in shacabku muujiyo isku duubni"
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo ku aaddan sannad-guuradii 59-aad ee kasoo wareegtay markii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed laga taago ciidda Soomaaliya u diray shacabka Soomaaliyeed.